Ikea waxay cusbooneysiineysaa noocyada nalalka TRADFRI ee la jaan qaadaya HomeKit | Wararka IPhone
In badan iyo in ka badan fursadaha aan ku haysanno suuqa si aan gurigeenna uga dhigno guri caqli badan. Iyo sidoo kale, waxaa jira walaac aad iyo aad u badan oo ka imanaya shirkadaha sida Apple oo kale ah si loo wanaajiyo amniga isku xirnaanta aaladaha casriga ah ee la xakamayn karo ee nidaamyada otomaatiga guriga Apple.
Oo waxaan u haynaa war wanaagsan dhammaan kuwa jecel adduunka ee otomaatiga guriga iyo gaar ahaan AppleK HomeKit. Waana wiilasha Ikea waxay rabtaa inay ka mid noqoto shirkadaha keena nalalka iyo qalabka casriga ah ee gurigeenna. Hadda, iyagu hadda ayey bilaabeen nalalka cusub ee TRADFRI, nalalka casriga ah ee la jaan qaada HomeKit ka yimid Apple. Boodka ka dib waxaan ku siin doonaa faahfaahin dheeraad ah oo ah waxa aan ka heli doonno ...
Ikea waxay rabtay inay cusbooneysiiso noocyada kala duwan ee TRADFRI ee nalalka casriga ah leh nalalka cusub ee raacaya isbedelada qaybta. Cusub guluubka feylka leh E26 socket (oo aan wali laga helin bogga internetka ee Isbaanishka) oo na siiya illaa seddex heerkul midab oo kala duwan oo gaaraya illaa 806 lumens. A guluubka cusub ee caadiga ah ee loo yaqaan E12 guluub oo noo oggolaanaya inaan midabkiisa beddelo, dushiisana waxaad ku sameyn kartaa xirmo bilow ah TRADFRI. Marka lagu daro nalalkaan cusub, Ikea wuxuu rabay inuu suuqa galos albaabbada laydhka, wax shirkado kale sida Nanoleaf ama LIFX hore u sameeyeen. oo leh dhowr loox oo kala cabbir duwan oo aan sidoo kale ku isticmaali karno Apple HomeKit
Sidaan soo sheegnay, waxaa lafilayaa inyaryar (gaar ahaan inta lagu jiro bisha Ogosto) guluubyada cusub ee TRADFRI ee laga helo Ikea waxay imaan doonaan dukaamada kaladuwan ee noocyada iswiidhishka ah ay ku leeyihiin aduunka oo dhan. Marka waad ogtahay, markaad booqato alaabta guriga iyo qurxinta weyn, ku istaag qeybta nalka si aad u aragto warka. Waxaanan ku xasuusinaynaa in nalkan cusub ee 'TRADFRI' ay ku soo biiri doonaan indhooleyaal caqli-gal ah oo u dhigma HomeKit sidoo kale inta lagu jiro bisha Ogosto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Ikea waxay cusbooneysiineysaa noocyada nalalka TRADFRI ee la jaan qaada HomeKit